​बाम गठबन्धन दुई तिहाई नजिक
Monday,4Dec, 2017 9:43 PM
काठमाडौं, १८ मंसिर । मुलुकका प्रमुख दुई बाम शक्ति नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतको बामपन्थी गठबन्धन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दुई तिहाईनजिक सिट जित्ने भएको छ । यस निर्वाचनमा मुलुकको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका सबैजसो स्थानमा बाम गठबन्धन विजयी हुने आकलन सार्वजनिक भएका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ ३२ जिल्लाका ३७ सिटमध्ये ३० सिटमा बाम गठबन्धनले जित्ने देखिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन आउँदो बिहीबार हुँदै छ । त्यसमा पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले अत्यधिक सिट जित्ने स्पष्ट भएको छ ।
विभिन्न सर्वेक्षक तथा विश्लेषकहरुका अनुसार, प्रदेश नं. १ मा बाम गठबन्धनले ९० प्रतिशत सिट जित्ने भएको छ । र, त्यहाँको प्रदेश सरकार पनि एमाले नेतृत्वमा बन्ने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. ३ मा पनि बाम गठबन्धनकै वर्चस्व हुने देखिएको छ । तुलनात्मक रुपमा विगतमा काठमाडौँ उपत्यकामा कमजोर देखिए पनि यसपटक बाम शक्तिहरुको एकताका कारण आम मतदातामा व्यापक उत्साह र भरोसा देखिएको छ । त्यसैले यसपटक उपत्यकाका १५ सिट मध्ये अधिकांशमा बाम शक्तिहरुले पकड जमाउने भएका छन् । प्रदेश ३ को प्रादेशिक सरकार पनि बाम गठबन्धनले नै बनाउने निश्चित भएको छ ।
विगतमा प्रदेश ४ मा कांग्रेसको उपस्थिति बलियो रहँदै आए पनि यसपटक उसले ऐतिहासिक क्षति बेहोर्दै छ । यस क्षेत्रबाट कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु अस्तित्वको लडाइँ लड्दै छन् । कांग्रेसकै सहारामा उठेका बाबुराम भट्टराईलाई पनि साख जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । बाम शक्तिहरुको एकताका कारण विगतमा बामपन्थी पक्षधर भइकन पनि निराश भएको जनमत समेत यसपटक उत्साहका साथ खुलेर बामपन्थीलाई जिताउन लागिपरेका छन् । त्यसैगरी तटस्थ जनमत पनि राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति एउटा शक्तिलाई सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार चलाउन दिनुपर्ने र आर्थिक उन्नतितर्फ मुलुकलाई लानुपर्ने भन्दै बाम गठबन्धनतर्फ ढल्किएको छ ।
प्रदेश ५ मा पनि ९० प्रतिशतकै हाराहारी सिटमा बाम गठबन्धनले जित हासिल गर्ने पक्का भएको छ । ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउने कांग्रेसको निर्णयबाट आक्रोशित, नाकाबन्दीमा कांग्रेसले देखाएको भारतपरस्त व्यवहार लगायतका कारण पनि यस क्षेत्रको जनमत यसपटक खुलेआम बाम गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लामा लालझन्डा फहराउने निश्चित भएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि बाम शक्तिहरुको पल्लाभारी देखिएको छ । यहाँ पनि प्रादेशिक सरकार बामपन्थीकै बन्ने निश्चित छ । कांग्रेसले राप्रपाजस्ता दरबारिया तथा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई बोकेको र दीपक बोहरा जस्ता भ्रष्ट एवं आपराधिक पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई काँध थापेको कारण पनि यहाँको स्वतन्त्र जनमत मात्रै होइन, कांग्रेसको पार्टी पंक्ति नै कांग्रेसबाट विरक्तिएको छ । पहिला क्षेत्रीय एवं जातीय पृष्ठभूमिका दलहरुको प्रभाव रहेको तराई क्षेत्र र मधेसी समुदायमा समेत बाम गठबन्धनप्रति झुकाव निकै बढेको छ । विगतमा क्षेत्रीयतावादी दलले आफ्नो भावनामा खेलवाड मात्र गरेको, धोका दिएको, राष्ट्रहितविपरीतका कार्य गरेको र कांग्रेसले उपयोग मात्र गर्न खोजेको भन्दै तराईको जनमत बाम गठबन्धनतिर ढल्किएको हो । हृदयेश त्रिपाठी लगायतका नेताहरुले समेत विगतमा राजपा, तमलोपा जस्ता क्षेत्रीय दलमा लागेर गल्ती गरेको, अन्ततः देश जोगाउन एमाले नै चाहिने रहेछ भन्दै सूर्य चिन्हमा भोट मागिरहेका छन् । र, उनीहरु भन्दैछन्, ‘देश रहे पो मधेस रहन्छ ।’
प्रदेश नं. ६ मा माओवादीको पडक बलियो देखिएको छ । त्यसकारण त्यहाँ पनि करिब शत प्रतिशत स्थानमा बामपन्थी शक्तिले जित्ने देखिएको छ । प्रदेश सभामा त विपक्षी दल नै खोज्नुपर्ने अवस्था आउने आकलनहरु सार्वजनिक भएका छन् । गएको स्थानीय निर्वाचनमा बाम शक्तिहरु अलगअलग लड्दा समेत माओवादी र एमालेकै वर्चस्व रहेको थियो भने अहिले त झनै माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा उभिएपछि कांग्रेसलाई त्यसको विरुद्धमा लड्ने उम्मेदवार पाउनै हम्मे परेको थियो ।
कांग्रेसको निम्ति आसलाग्दो मानिएको एक मात्र क्षेत्र प्रदेश ७ हो । तर, बामपन्थी शक्तिहरुको एकताका कारण त्यहाँ पनि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्तित्व रक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन । भीम रावल, लेखराज भट्ट, खगराज भट्ट लगायतका नेताहरुको प्रभावको तुलनामा देउवा फिका देखिएका छन् । कांग्रेसकै उक्साहटमा टीकापुर नरसंहार भएको, नाकाबन्दीको पक्ष लिएको, सुशीला कार्कीजस्तो इमानदार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर स्वतन्त्र न्यायालयमाथि आक्रमण गरेको कारण कांग्रेसप्रति प्रदेश ७ को मात्र होइन, देशैभरिको जनमत आक्रोशित छ । कांग्रेस सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणाले खुलेआम घूस र कमिसनको जालो ओछ्याएर कांग्रेसकै बेइज्जत गरेको लगायतका आरोप पनि कांग्रेस नेतृत्वमाथि लागेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वका आफ्नै अलोकप्रिय र अराजक क्रियाकलापका कारण कांग्रेसकै पार्टीपंक्ति केन्द्रदेखि जिल्लासम्म असन्तुष्ट र क्षुब्ध छ । त्यसकारण कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वाद चखाउन पनि यसपटक बाम गठबन्धनलाई मतदान गर्ने जनमत ठूलो छ ।
प्रदेश नं. २ मा बाम गठबन्धन अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर भए पनि कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई उछिन्दै पहिलो शक्ति बन्ने भएको छ । त्यहाँ एमालेलाई उछिन्ने तागत नभएपछि कांग्रेस, राजपा र फोरमबीच दोस्रो स्थान सुरक्षित गर्ने होड देखिएको छ । प्रदेश सभामा पनि बाम गठबन्धन पहिलो बन्ने निश्चित छ । र, बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयासमा छ । त्यस क्षेत्रमा कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले आफूहरुको भावनालाई दुरुपयोग मात्रै गरेको भन्दै त्यहाँको जनमत यी तीनवटै शक्तिप्रति रुष्ट छ । मधेस आन्दोलनका बेला अनाहकमा ५२ जना युवाको ज्यान गएको, नाकाबन्दीका बेला भारतपरस्त व्यवहार देखाएको र अहिले राष्ट्रिय विखण्डन र सामाजिक विकृतिलाई बढावा दिने गरी घोषणापत्र ल्याएका कारण पनि मधेसको सचेत जनमत मधेसवादी भनिने क्षेत्रीय शक्तिको पक्षमा छैन ।
त्यसमाथि कांग्रेसले कुनै स्पष्ट एजेन्डा र कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेन । बाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई प्रमुख एजेन्डा मात्रै बनाएन, स्पष्ट लक्ष्यसहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट तर्सिएपछि कांग्रेस नेतृत्वले बामपन्थी शक्तिप्रति घृणा र भय उत्पन्न गर्न अधिनायकवाद आउने अफवाह फैलाउने कोसिस गरेको छ । तर, त्यो प्रोपोगान्डा पनि जनताले नपत्याउने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा छटपटाहट देखिएको छ । कतिसम्म भन्ने देउवाले धनगडीमा गएर ७ नं. प्रदेशका जनतालाई धम्कीको भाषामा भनेका छन्, ‘मलाई जिताए म फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ । बामपन्थीलाई जिताए पूर्वका मान्छे हुन्छन् ।’ एउटा राष्ट्रिय दलका नेताले सीमित क्षेत्रीयतायुक्त संकुचित सोच राख्ने र नेपाली–नेपालीबीच विभाजनको रेखा कोर्ने काम गरेका छन् । यसबाट पनि उनी कति असुरक्षाभावले ग्रस्त छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।